Matongerwo eNyika, 07 Chivabvu 2019
Chipiri 7 Chivabvu 2019
Chivabvu 07, 2019
Vanhu Vofira Mumugodhi paNugget Mine kuMatobo
Basa riri kuenderera mberi kuedza kubudisa vanhu vanofungidzirwa kuti vakadhirikirwa nemugodhi uri pedyo neNugget Mine kuMatobo District pedyo neguta reBulawayo.
Vaive Vashandi veKanzuru yeHarare Voratidzira neKushaya Mari dzeMudyandigere
Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare avo vave pamudyandigere varatidzira paTown House nhasi vachiti havasi kufara nekusatambiriswa mari kwemakore akawanda.
Zvikoro Zvakarohwa neCyclone Idai Zvovhurwa Pamwe neZvimwe muNyika Yose
Gurukota rinoona nezvedzidzo Muzvinafundo Paul Mavima vanoti zvikoro zvose kuChipinge neChimanamani zvakawirwa nedambudziko redutumupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai zvavhurwa.
Hupfumi hweNyika Hworamba Huchienda kuMawere, Vamwe Vachiti Huwori Ndiyo Honzeri
Vamwe vanoti huwori munyika ndihwo honzeri hombe mumatambudziko aya, ayo anonzi ari kusunga vanhu, zvikuru varombo, zuva nezuva, vachipomera hurumende kutarisa rutivi panoitwa huwori uhwu.
Chivabvu 06, 2019
VaMnangagwa Vari muBotswana kuMusangano weKutengeswa kweNyanga dzeNzou
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kuKasane, Botswana nhasi kumusangano wakanangana nekuchengetedzwa kwenzou weKasane Elephant Summit uchapindwa nevatungamiri venyika dziri mugungano rinonzi Kavango-Zambezi (KAZA).
Potraz Inoti Hapana Chakaipa paKukwidzwa kweMitengo yeKushandisa Nharembozha Kana Kuti "Data"
Kambani yehurumende inoongorora mashandiro emakambani enharembozha nemadandemutande, yePotraz nhasi yaudza paramende kuti kukwidzwa kwemitengo yekushandisa nharembozha kuti data kunokodzera.
VeChidiki Vomiswa paMberi peDare muBulawayo Mushure Mekufarisa Zvakapfurikidza
Vamwe vechidiki vamiswa pamberi pedare ramajisitireti muBulawayo nhasi mushure mekunge vasungwa pakupera kwesvondo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzeguta vachiita zvemafaro zvakapfurikidza mwero.
Vane Chirwere cheShuga Vodhurirwa Zvakanyanya neMishonga Zvoisa Hupenyu Hwavo muNjodzi
Vanhu vane nechirwere cheshuga vanoti hupenyu hwavo hwave munjodzi sezvo mishonga yavanoda iri kuramba ichiwedzerwa mari zvekuti vave kupota vachimboregedza kuinwa.
Mutungamiri weNyika, VaMnangagwa Vanonoona Basa rekuGadziriswa kweMatapi Flats muMbare
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vashanyira dzimba dzemuturikidzwa dzeMatapi Flats dziri mumusha weMbare, kunozvionera voga basa rekugadziridza dzimba idzi riri kuitwa nekanzuru yeHarare ichibatsirwa nehurumende pamwe nekambani yeFGC Zimbabwe.
Nhaurirano dzeKugadzirisa Nyika Dzotarisirwa Kuparurwa Zviri paMutemo Svondo Rinouya.
Izvi zvabuda mushure memusangano waitwa muHarare nevamwe vevatungamiri vezvematongerwo enyika vakapinda musarudzo yemutungamiri wenyika kumuzinda weState House uko vagamuchidzwa zvakaunganidzwa nemakomiti mana akaumbwa kuti agadzire hwaro hwenhaurirano idzi.
NACORA Inoda kuti Hurumende Irambidze Kudzingwa Kwevana Vechikoro Vashaya Mari Yedzidzo
Sangano rinorwira kodzero dzevatengi, reConsumer Rights Association, kana kuti NACORA, rakumbira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzorerwa kumba pamusaka pekusabhadhara mari yechikoro panovhurwa zvikoro magwana.
Chivabvu 05, 2019
Platform for Youth Development Yorwisa Kuti Mhuri Dzisabviswa kuMunyokowere, kuChipinge
Sangano revechidiki rePlatform for Youth Development rinoti rave kushanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukuedza kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dzigere Munyokowere kuChipangayi, mudunhu reChipinge kuManicaland.
MDC Yoronga Kuratidzira kuMashonaland West Musi weChishanu
Nhengo dzeARTUZ Dzasungwa Dzisati Dzapa VaNcube Nyunyuto Dzadzo